Mpanamboatra Masinina Fitaovana - Mpamatsy Masinina Fitaovana China
LQMG Series Crusher plastika
Ny boaty rotor rehetra manaparitaka ny hopper an'ny andiany LQMG dia novaina indray mba hampitomboana ny vokatra manaparitaka ireo fitaovana poakaty, toy ny tavoahangy plastika sy ireo vokatra fanodinana famafana hafa, ary hanatsarana ny voka-dratsiny.
Chiller chiffant vita amin'ny rano
Ny compresseur kambana vita amin'ny kambana mihidy dia voafantina. Raha ampitahaina amin'ny compressor mamaly nentin-drazana dia manana ny mampiavaka ny fahombiazana avo, fandidiana mangina, fandidiana tsotra ary androm-piainana maharitra.
Karazan-tsakafo (module) vondrona chiller rano
Toekarena ary mitohy: ny compressor frigtera dia mandray ny compressor karazana nohafarana malaza dia misy tabataba kely, avo lenta, ary misy ny fantsom-barahina fifanakalozana hafanana mahomby, ampahany amin'ny valizy fametahana. Mahatonga ny chiller hampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ary hihazakazaka tsy tapaka.
Karazana boaty (module) chiller milamina
Toekarena ary mitohy: ny compressor frigtera dia mandray ilay compresseur malaza nohafarana avy any ivelany dia karazana compressor.dia misy tabataba kely, fahombiazana avo lenta,
Fandidiana mora: ny fiasan'ny chiller isan'andro dia mifantoka amin'ny tontonana fanaraha-maso, ary mora ampiasaina,. Azonao atao ny mametraka azy amin'ny import SEIMENS PLC,
Chiller fiovam-po matetika
Tombony azo amin'ny fitsitsiana angovo: ny compresseur, ny fan, ny teknolojia fanovana matetika ny paompin-drano no vokatra mandroso indrindra.
Fantsana chiller hafanana ambany (module)
Ny fitaovana dia namboarina manokana ho an'ny rafitra fitehirizana angovo, mampiasa teknolojia mandroso, famatsiana mamela rano ambonin'ny -20 ℃ ary afaka mifehy tsy tapaka ny hafanan'ny bobongolo etsy ambany -5 ℃.
LQQA Mpifangaro loko marindrano
Ny barika vy sy paddles tsy misy harafesina ary mora diovina. Hopper dia afaka mirona hatramin'ny 100 degre ho an'ny famoahana fitaovana mora.
Fangaro mifangaro haingana, fanjifana angovo kely ary famokarana avo. Dian-tongotra kely ary misy castors ho an'ny fivezivezena. Planet-cycloid reducer dia mateza sy ambany tabataba. Ny fiarovana dia manome antoka fa tsy mandeha ny masinina rehefa mikatona ny sarony.
LQQD Fanamainana loko
Ny fametrahana ny mari-pana sy ny famantaranandro dia ao anaty singa iray ho an'ny fanitsiana tsotra. Mifangaro ao anaty efitrano mihidy ny fitaovana; barika dia misy sosona roa sosona ho fitehirizana ny hafanana. Ny barika dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony mba hanadiovana mora foana. Fanairana ho an'ny môtô be loatra.
Ny barika dia vita amin'ny vy hafanana avy any ivelany izay misy loko voaravaka. Ny fihodinan'ny 360 degre dia mamela ny fampifangaroana ara-nofo sy ny sakafo ara-nofo mety. Fender dia manakana ireo mpandraharaha tsy hiditra amin'ny faritry ny milina mba hiantohana ny fiarovana